Biradium, Birta V - Goodao Technology Co., Ltd.
Waxay awood u leedahay inay iska caabbido hydrochloric acid iyo sulfuric acid, wayna kafiican tahay inta badan birta birta ah ee gaaska, milixda iyo iska caabbinta daxalka biyaha. Heerkulka qolka, xaalada cufan ee vanadium waa mid xasiloon. Kama falceliso hawo, biyo iyo alkali, waxayna u adkaysataa inay ku milmaan aashitada Vanadium waa bir qalin cawlan Barta dhalaaliddu waa 1890 ± 10 ℃, taas oo ka mid ah biraha dhifka ah ee leh barta dhalaalka badan. Meesheeda karkaraya waa 3380 ℃, vanadium saafi ah waa adag yahay, magnetic iyo ductile, laakiin haddii ay ku jiraan qadar yar oo wasakh ah, gaar ahaan nitrogen, oxygen, hydrogen, iwm, waxay si weyn u yareyn kartaa balaastigiisa.
Hore: Titanium Carbonitride, TiNC
Xiga: Budada Zirconium, Zr
Warshadaha bir vanadium
Warshad vanadium bir ah
Soo-saaraha birta birta
Soo-saareyaasha vanadium birta ah
Qiimaha bir vanadium
Xigashooyinka bir vanadium